Inona no atao hoe mpahay etolojia ary nahoana no mahasoa antsika izy io? Tontolo alika
Inona no atao hoe mpahay etolojia ary nahoana no mahasoa antsika izy io?
La Ny etolojia dia fandinihana siantifika ny fitondran-tenan'ny olombelona sy ny biby. Ny etôlôjiana dia manolo-tena amin'ny fandinihana ny fihetsiky ny karazana mba hamaritana ny lamina ary hahafantarana hoe hatraiza ny fanampiana ireo karazan-toetra ireo amin'ny fomba fiaina velona. Amin'izao fotoana izao dia misy geolojista biby natokana ho an'ny fitondran-tena amin'ny alika amin'ny fomba manokana, izay mety tena ilaina.
El ethologist manolotra asa siantifika manokana izay nahatonga azy ho lasa mpiorina tsara indrindra amin'ny fitondran-tena biby. Ny Ethologists dia afaka miasa amin'ny toerana maro, manomboka amin'ny zoo ka hatrany amin'ny valan-javaboary na afaka miara-miasa amin'ny biby fiompy mihitsy aza.
1 Inona no ataon'ny mpahay etolojia?
2 Ahoana ny fiasan'ny etôlôjiana
3 Ny fampiasana ny etôlôjian'ny biby
Inona no ataon'ny mpahay etolojia?
Mandinika ara-tsiansa ny etôlôjiana ny fihetsiky ny biby any an'ala ka fantaro ny antony sy ny antony manosika an'io fihetsika ioNy fomba anampian'izy ireo azy ireo amin'ny tolona ho tafavoaka velona. Na dia resahina matetika amin'ny fanadihadiana any an-tsaha aza dia azo atao ihany koa ny mandinika ny fitondran-tena ny etolojia amin'ny toe-javatra samihafa. Ao anatin'ny etolojia dia misy sehatra maro izay ahafahana mianatra ny fitondran-tenan'ny karazana sasany amin'ny tontolo samihafa. Na dia izao aza dia hiresaka momba ny fitsipi-pitondran-tena ho an'ny biby isika, satria io no hanampy antsika hahafantatra ny antony manosika ny fitondran-tenan'ilay alika sy hahita vahaolana. Na izany aza, misy sampana etolojia maro hafa, ao anatin'izany ny etolojia olombelona.
Ahoana ny fiasan'ny etôlôjiana
Tokony hahalala ny ilay ethologista fitondran-tena ny biby amin'ny tontolo nomena ary noho izany dia hanadihady amin'ny antsipiriany izy hahitana diagnostika, izay ahafahana mamorona vahaolana amin'ny olana ananantsika. Ny tranga voalohany dia ny fahafantarana ny antony na ny mekanisma, izany hoe inona no mahatonga ny fihetsika tadiavintsika hofoanana. Ohatra, ny fahalalana ny antony mahatonga ny alika matahotra tahotra olona na zavatra sasany. Ny dingana manaraka dia ny fisaintsainana ny anjara asan'io fihetsika voalohany io. Inona no ilana izany fihetsika izany amin'ny natiora? Izany hoe, ao amin'ny ohatra ny alika matahotra zavatra iray dia mampivelatra fitondran-tena izay amin'ny fotony dia endrika iray velona, ​​mandositra izay mety hanimba azy.
Manaraka izany dia tsy maintsy mamolavola inona ny toetra maha izy azy. Izany dia momba ny fahalalana ny fomba nivelaran'ny biby an'io fihetsika manokana io. Ho an'ity dia ilaina ny mahafantatra ny fotoana nipoirany na raha vokatry ny trauma io tamin'ny taona voalohany nianarana na zavatra taty aoriana. Miaraka amin'ny fizotry ny fivoarana, manontany tena ny mpahay fizika momba ny fomba nahatonga ity fihetsika ity hampivoatra ilay karazany ary hatraiza no mety ilana azy amin'io tontolo io.
Amin'izany rehetra izany dia inona no ataon'ny mpahay etolojia fantaro ny tontolo iainan'ilay biby, ny antony manosika azy ireo, ny antony ary izay rehetra mahatonga azy ireo hanao toy izany, mifototra amin'ny maha-zava-dehibe ny fihetsika voajanahary sy ny fivoarana mitranga eo amin'ny natiora ary izay ao anatin'ny singa fototarazo. Misy fiantraikany ny zava-drehetra raha ny amin'ny famoronana fihetsika iray.
Ny fampiasana ny etôlôjian'ny biby
Miasa amin'ny alika ny etôlôjiana veterinary, biby iray izay tena fatra-pitia ny fitondrantenany tamin'ny alàlan'ny fanatrehany ny olombelona. Amin'ity tranga ity, ny etolojia dia mila mahafantatra ny tontolo iainan'ilay alika, ny fihetsiny ary koa ny fomba fifandraisany amin'ny olony hahafantarana ny zava-drehetra. inona no mety hisy heriny eo amin'ity fihetsika ity. Raha vantany vao mipoitra ny diagnostika, ny zavatra atao dia ny manolotra asa an-tsaha hanovana ny fihetsika. Ity fanovana fitondran-tena ity dia natao mba hahafahan'ny alika mianatra manao fihetsika iray hafa izay manampy azy handresy ilay olana. Amin'ny fahafantarana ny antony sy ny olana dia azonao atao ny miady aminy mba hahafahan'ny biby hitondra tena amin'ny fomba voalanjalanja.
Ny etôgôlikanina momba ny biby dia manao a fandalinana lalina ny fihetsiky ny alika tsirairay, fa ampihariny amin'ny fitondran-kaninina foana izy io, izay tena fantatr'izy ireo. Raha fintinina dia tsy maintsy antsointsika izany rehefa manao fihetsika tsy maintsy ovaina ny alika satria tsy mety na manampy azy isan'andro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Inona no atao hoe mpahay etolojia ary nahoana no mahasoa antsika izy io?